.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: New Flash Mp3 Player
ဒီ Flash Mp3 Player တွေကို ကျွန်တော် နောက်အသစ်လုပ်မယ့် Album အတွက် ရှာထားတာပါ။ ဘာဆော့ဝဲလ်တွေမှ
သုံးစရာမလိုပဲ .mp3 ဖော်မက်နဲ့ သီချင်းတွေကို လင့်ထုတ်ပြီး ကုတ်နဲ့ ထည့်တင်ရုံပဲမို့လို့ သုံးရတာ အရမ်းကို လွယ်ကူ
အဆင်ပြေပါတယ်။ ပို့စ်တင်တဲ့အခါ သီချင်းလေးတွေ ထည့်တင်ချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အနော့်လို Album တွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်
အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ နမူနာ နားထောင်ကြည့်နိုင်သလို အသုံးပြုဖို့ကုတ်တွေလည်း ပေးထားပါတယ်။
<object id="music-player3" data="https://googledrive.com/host/0B2_DQmuprDoiaU9YazhWSkw5LTA/OriginalMusicPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="90" width="270"><param value="true" name="allowfullscreen"><param value="always" name="allowScriptAccess"><param value="transparent" name="wmode"><param value="mediaPath=https://googledrive.com/host/0B2_DQmuprDoiWkxPM0h5cWlyZ1k/A-Way-Youk-Chit-Thu.mp3&amp;autoLoad=true" name="flashvars"></object>
Sai Sai Khan Hlaing - I Love You
<embed src='https://googledrive.com/host/0B2_DQmuprDoiaU9YazhWSkw5LTA/player.swf?file=https://googledrive.com/host/0B2_DQmuprDoiWkxPM0h5cWlyZ1k/I%20Love%20You.mp3' height='48' width='325' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' flashvars="&file=https://googledrive.com/host/0B2_DQmuprDoiWkxPM0h5cWlyZ1k/I%20Love%20You.mp3&plugins=viral-2d"/>
သူငယ်ချင်း အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ.. စေတနာများစွာဖြင့် - Thurainlin
Posted by Thurainlin at 08:37
Labels: Blog, Coding, Flash, Flash Mp3 Player